'ट्रमाका लागि आउनु पर्ने अक्सिजन पुलिसको ठूलो मान्छेहरु आएर लिएर गए, अत्यन्तै मर्माहत छु' :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
'ट्रमाका लागि आउनु पर्ने अक्सिजन पुलिसको ठूलो मान्छेहरु आएर लिएर गए, अत्यन्तै मर्माहत छु'
डा सन्तोष पौडेल बिहिबार, वैशाख ३०, २०७८, २२:१६:००
अत्यन्तै मर्माहत छु साथिहरू!
साँझ ५:४९ बजे
आज तेस्रो दिनमा कोठामा आएको मात्र के थिएँ फेरी हस्पिटलबाट फोन आयो
‘सर, अक्सिजन सकिनै लाग्यो!’
‘कसरी!’ आज त हामीहरुलाई ५० सिलिण्डरका दरले ४-४ घण्टामा दिने हैन र!
‘हो सर, तर ४ बजे आउनुपर्ने Gas अझै आएन। सर कम्पनीमा सोधिदिनुहोस् न किन आएन? अब १५ मिनेटलाई मात्र पुग्छ।’
मैले कम्पनिको owner सँग फोन गर्छु, ‘…..जी खैत आज पनि त्यस्तै भो किन? बिरामी त मर्छन् केहिबेरमा यदि supply भएन भने त।’
‘४ बजे नै आउनुपर्ने किन ढिला भयो त?’
ऊ-सर हजुरहरुलाई राखेको Oxygen Cylinder पुलिसको ठूलो मान्छेहरु आएर लिएर गए।
हामीले के भन्ने सर, जबरजस्ती गरेपछि!
म ट्वाँ ! (रिस र पिडाले रुन मात्र सकिन)
म; अब के हुन्छ?
ऊ: हैन सर १० वटा पठइदिहाल्छु।
म: यार तपाई ! मानिसहरु Ventilator मा छन्, oxygen बिना एक मिनेट रहन सक्दैनन्, खेलाँची सम्झनु हुन्छ यो मानव जीवनलाई! ती मानिसको मृत्यु भएमा जिम्मेवार को? तपाई कि म! कि ती ‘ठूला पुलिस’ ?
ऊ-सर त्यो त म के भनुँ।
त्यस पछि गृह सचिवज्यूलाई फोन गरेँ
र भनेँ, यो देशमा पुलिसको दादागिरी चल्दो रैछ हैन सचिवज्यू? , बरु मेरो अस्पताल तिनैलाई जिम्मा लगाइदिनुहोस् सर, मलाई हटाइदिनुस्!
उता: ….. यस्तै हो .. म बुझ्छु …..!!
पिडा छ हजुर
जीवनमा डाक्टर भएँ !
मानव जीवनलाई माया गरेँ।
आँखै अगाडि धेरै मृत्यु देखिरहेको छु,
मजस्तै जीवनहरु तिमीहरुलाई बचाउँन सकिन, माफ गर
हार्दिक श्रद्दान्जली प्रिय जीवनहरु!
-(ट्रमा सेन्टरका निमित्त निर्देशक डा सन्तोष पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा राखेको अनूभव)
बाजुरामा निमोनियाका बिरामी बढे २० मिनेट पहिले